"Kala dooro in gabdhahaagu ay isla dhintaan ama inay mid dhimato" - BBC News Somali
24 Febraayo 2019
Waa la cusbooneysiiyay 21 Agoosto 2020
Ibrahima gabdhihiisa noloshooda aad buu u jecel yahay
Labadan gabdhood ee mataanaha ah iskuna dheggan ee lagu kala magacaabo Marieme iyo Ndeye waxay mucjiso ku noqdeen dhaqaatiirta.
Lama fileynin in ay sii noolaadaan maalmo yar ka badan - balse bishii August ee sannadkii la soo dhaafay ayey iskuul ku biireen.
Waxay asal ahaan ka soo jeedaan Senegal, waxayna hadda ku nool yihiin magaalada Cardiff ee dalka Britain iyadoo dhaqaatiirta ay mucjiso ku noqotay sida ay u sii korayaan.
Aabahood, Ibrahima Ndiaye, wuxuu ku tilmaamay "halgamayaal" iyagoo guul ka sii gaaraya nolosha.
Markii hore dhakhaatiirta ayaa Ibrahima kala hadlaya go'aanka ku saabsan in la sameeyo qalliin lagu kala saarayo gabdhaha, kaasoo halis galin kara noloshooda, gaar ahaan horseedi kara iney dhimato Marieme ama in la iska dhaafo oo ay labadooduba isla dhintaan.
Ibrahima iyo labada gabdhood ee walaalaha ah ayaa wajahaya mustaqbal aan la hubin.
Laba gabdhood, oo jirkoodu mid yahay
Mataanahan isku dhaggn, ayaa dadaalka loogu jiro iney nolol helaan wuxuu sababay in laga qaado Senegal oo la geeyo oo la geeyo Wales
ee ilkaha quruxda badan leh
Marieme wadnaheedu aad buu daciif u yahay , sidaas darteed wey u dhiman kartaa
oo aad u iftiimeysa
cod macaanna leh
Haddii ay Mereme dhimato, tani waa Ndeye oo labadooda caafimaad ahaan fiican wayna la dhimaneysaa
Aabahood, Ibrahima - waa nin wajahaya qaadashada go'aanno aanan qaadashadoodu aysan suurta gal ahayn
Mataano isku dhagan - oo ay u badan tahay noocooda inaadan arkin.
Tiro aad u yar oo kaliya ayaa dhalata sannad walba, iyadoo intooda badan ay caloosha ku dhintaan, ama isla marka ay dhashaan ka dib.
Marieme iyo Ndeye, iyagu waa kuwo jidkaas marin.
Iyagoo jira labo sano iyo siddeed bilood, waxey ku nool yihiin magaalada Cardiff, waxaana wehliya aabahood, Ibrahima Ndiaye, oo 50 sano jir ah, isagoo kasoo raacey waddankii ay ku dhasheen ee Senegal.
Wuxuu ahaa safar adag, iyadoo qoyskani ay dhaaftay noloshoodii barwaaqeysneyd, halka haatan ay ku nool yihiin hotel iyo cunto yar oo la siiyo.
Gabdhahani haatan way bad qabaan, laakiin balaayo ayaa soo socota.
Wadnaha Marieme waa mid aad iyo aad daciif u ah, weyna dhiman kartaa.
Haddii ay taasi dhacdo, walaasheed Ndeye, oo iyada ka tabar roon way la dhiman doontaa.
Wakhti xaadirkan, mataaneyaashan maalin kasta wey sii korayaan noloshana way u sii macaanaaneysaa.
Laakiin sanadaha soo socda gudahood, kala doorasho aan lagu fikiri karin ayaa lasoo hor dhigi karaa Ibrahima.
Ma wuxuu dhakhaatiirta qalliinka u fasixi doonaa iney isku dayaan kala saariddooda- taasoo halis galineysa nolosha labada gabdhood, gaar ahaan Marieme?
Mise labada gabdhood ayuu aqabali doonnaa iney si wadajir ah u dhintaan?
Magaalada Dakar - caasimadda dalka Senegal. Waa magaalo xeebeed weyn oo dhacda galbeedka qaaradda Africa, taasoo Ibrahima uu ku heystay nolol wanaagsan.
Marieme iyo Ndeye waxay ku dhasheen Senegal
Wuxuu ahaa maamulaha mashruuc hirgalay, wuxuuna ka shaqeyn jiray abaabulka safarrada fasaxa iyo xafladaha ka dhaca guud ahaan gobolka, inta bandanna wuxuu howlahaas u sameyn jiray dalxiiseyaasha Faransiiska iyo Ingiriiska ah.Waa aabaha carruur qaan gaar ah, kuwaasoo ay u dhashay xaaskiisa koowaad, sanadkii 2015-kiina, xaaskiisa labaad ayaa uur qaadey.
Ibraahim ayaa sheegay in "baaritaan uurkeeda lagu sameeyay uu muujiyay gabar", "Hal gabar oo qura".
Xitaa markii ay xaaskiisa qeybta umulinta tagtay saddex isbuuc ka hor inta aysan dhalin, waxaa lagula taliyay in qalliin looga umuliyo maadaama uu aad u weynaa uurkeeda, mana jirin wax qeyrul caadi ah oo la filanayay.
"Waxaan uga gacan haatinayey xaaskeyga dhanka danbe oo muraayadda, anigoo baaq ugu sheegayay in wax walba ay fiican yihiin," ayuu yiri mar uu sharaxayay xaaladda.
"Dhakhaatiirta ayaa soo bixiyey cunugii, kadibna way mashxaradeen, iyagoo ii sheegay in wax waliba wanaagsan yihiin."
Waxey aheyd labadii habeenimo ka hor waabariga, sida qof waliba oo kale, Ibrahim waa uu daaley, isagoo wali xirnaa dharkiisa suutka ah ee shaqada iyo kabihiisa.
Xaqiiqdii, waxay ahayd in maalintaasi uu jooggo Belgium, si uu usoo qaato abaal marin uu ku muteystay dadaalkii uu u sameeyay qaban qaabinta booqasho samo fal ah oo baaskiil loo adeegsanayay.
Markii uu hubsaday oo ay niyadda u dagtay, wuxuu kasoo dhex baxay saxmaddii wuxuuna u soo baxay dibadda, si uu neecaawda habeenimo u qaato.
Wuxuu ku tiirsaday darbi, isagoo ALLE uga mahad celinaya iney si nabad ah ku dhalatay gabadhiisa.
Laakiin isla markii uu sidaas sameeyay, farriin ayaa u soo dhacday oo looga dalbanayo inuu kusoo noqdo gudaha, si uu ula kulmo Dr Lamine Cisse, oo ah dhakhtar ku takhasusay cudurada haweenka iyo dhalmada carruurta.
Ibrahima wuxuu si wanaagsan u garanayey dhakhtarkan maadaama uu horay u dhaliyay labo ka mid ah carruurtiisa waaweyn.
Laakiin markan, wajigiisa farxad kama muuqanin.
Ibrahima ayaa yiri: "Wuu I fariisiyey wuxuuna yiri, 'Waxaan doonayaa inaynu ka wada hadalno mataanaha'."
Maskaxda Ibrahima ayaa bilawday inay aad u shaqeyso.
Baaritaankii scan-ka ma aanu soo saarin mataano. Ma carruurtii baa loo dooriyay? Waxyaabo la yaab leh ayaa ka dhaca Senegal…
Soddon daqiiqo kadib, oo uu Ibrahima aqbalay warka, waxyaabo kale ayaa soo socday.
"Marka ii sheeg… maxaa ka khaldan mataanaha?" ayuu u weeydiiyey, si hoose.
"Mataano isku dhagan," ayuu yiri Dr Cisse. "Waa kuwo isku dhagan."
Xilligaas oo ku beegneyd 18-kii May 2016-kii, ayey ahayd markii ay Ibraahima noloshiisa dunida guud ahaan is baddashay.
"Wey iga dhaaci kari weysay," ayuu yiri Ibrahima. "Waan iska aamusay, anigoo isku dayaya inaan fahmo, sababta waxan loo arki waayay.
"Waxaan aad ugu careysnaa dadkii xaaskeyga saarey baaritaanka scan-ka.
"Ma aanan hadli akrin, illin baa isoo dhaafeysay. Waxaan caro awgeed haraanti ula dhacay alaabta waana calaacalay."
Markii la gaaray shanti aroornimo ayuu Dr Cisse Ibrahima u kaxeeyay si uu u arko gabdhihiisa, iyadoo xaaskiisana ay taallay oo markaas ay soo fiicnaaneysay.
Ibrahima ayaa yiri: "Waxaan rajeynayaa inay arrintani noqon doonto mid yasiran, si fududna loo kala qeybin/jari doono.
"Waxaan xasuustaa in markii aan u sii socday qolka, aniga dhan dareen iga maasheeyey, laakiin haddana aan is weeydiinayey waxa dhabta ah ee socda.
"Waxay dul saarnaayeen miisaanka wax lagu cabiro, sidaa daraadeed waa markii ugu horeysay ee aan arko wajiyadooda iyagoo foorara aniga isoo eegaya. Dabadeed waxaan arkey gacmahooda isku dhagan.
"Waxaan ku dul wareegay miisaankii. Aad bay u yaraayeen, iyagoo culeyskoodu ahaa dhagax barkiis ama (3.8 kg).
"Ma garan karin habka ay isugu dhagan yihiin. Waxaan rajeynayey inay leeyihiin afar cagood, taa badalkeeda labo ayey leeyihiiin.
"Labadooduba way isoo eegayeen, anigoo dhan baa qaboobay."
Arrimuhu markay halkaa marahayaan Dr Cisse kaalnitiisaa dhakhtarnimo waala hakiyey, waxaa xaaladdii Ibrahima loo wareejiyey la taliye xeel dheere ah.
Markii uu arkay xaaladda quusta ee Ibrahima, wuxuu xasuusiyey iimaanka diinta Islaamka, maadaama uu yahay Suufi.
Suufinimada waa qeyb kamid ah Islaamka, taasoo, uu ku sheegey Ibrahima, in qofka ay ku adkeyneyso inuu ahaado mar waliba qof wanaagsan oo maskax furan
Waxaa xaaladdiisa dajisay markan iimaanka diinta Islaamka, ayuu yiri Dr Cisse.
waayo aragnimada iyo khibradda laga dhaxlo waxyaabaha lagu hungoobo ayey dadku wax ku qaataan.
Ha yeeshee wali ma aanu joojin Ibrahima in dhidid ka imaanayo.
Sidaa darteed waa markii uu Dr Cisse u sheegay isaga: "Haddii aad sidan kusii socoto, maxey nolosha gabadhani noqon doontaa? Maxaa iyaga ku dhici doonaa, haddii aad tahay qof aad u nugul ama daciifa?
Wuxuu ku amrey Ibrahima inuu tago musqusha, soo dhaqdo wajiga, iska tirtiro illinta, kadibna soo noqdo.
Markaa kadib waxaa harey hal kalmad oo loo sheegi lahaa: "Tani waa caqabad lasoo daristay noloshaada, waana inaad u diyaar garowdaa."
Sidaa darteed markan waxaa u bilawday nolol cusub
Haatan waxaa hareeyey Ibrahima jaceylka waalidnimo, iyadoo ay qabsatey mawjad taxadar iyo xanaaneyn gaar ah oo uu sameynayo gabdhahiisa qurxoon.
Ibrahima ma garanayo go'aan uu qaato
Laakiin Marieme, si gaar ahaaneed, way jiran tahay - way shubantay, waxaana ku adag neefsashada.
Xal ayaa loo baahan yahay, waliba si degdeg ah.
Walina shaqaalaha waxey u muuqdaan kuwo isku dhex yaacsan hubaal la'aanna ah, iyadoo halista gabdhuhu ay ku dhiman karaanna ay tahay mid isku celi celiskeed aad u sareeyo.
Ibrahima ayaa u cararay gurigiisii, isagoo soo qaatey waxoogaa dhar ah, dabadeedna si degdeg ah u soo noqday, si uu ugu diyaar garoobo in gabdhihiisa uu u wareejiyo isbitaa kale oo carruurta u gaar ah, oo agagaarka ku yaalla.
Markii halkaa loo wareejiyey, gabdhihii waxaa lagu xiray mashiino iyo agabka ku kaalmeeya bani'aadamka qaadashada neefta.
Ha yeeshee dhibaatadan adag oo ay keentay xaaladan, Ibrahima wuxuu wajahayaa dhibaato kale.
Waa dal uu ka jiro quraafaad xididadiisu dheer yihiin, warka ah in ilmo cajiib ah ay dhasheen wuxuu ku baahan magaalada.
"Gabdhihii waxaa looga tagay jaran jaro, halkaasoo uu arki karo qof waliba," ayuu yiri Ibrahima.
"Miyrikiba iga tagay anigoo dhan, markii aan arkay qof aan garaneyn oo leh sawir baan ka qaaday gabadhaha."
Aad baan uga carooday, Ibrahima ayaa ka dalbadey qofkii daabatey sawirada caruurtiisa, inuu tuso waxa ku jira taleefankiisa, wuxuu ka qaadey isagoo u geeyey maamulka guud ee isbitaalka.
"Waxey iila mid aheyd anigoo miir daboolmay," ayuu yiri. "Tani waxey daaha iiga rogtay sida ay ugu baahan yihiin gabdhahayga inaan u fidiyo gabaad iyo difaacba.
"Waan is xakameyn waayey. Waxaan jabiyey taleefankii, oo aheyd wax aan munaasib igu aheyn inaan sameeyo, ha yeeshee aad baan isugu dhax yaacay oo aan u carooday."
Ibrahima waa loogu garaabi karey sababaha keenay walwal kiisa iyo caradiisa.
Siyaabo badan, illaa iyo intii uu dalkani ka qaatay madax banaanidiisa Faransiiska 1960-kii, Senegal ayaa muujiyey guulo la taaban karo, marka loo eego dalalka qaaradda Africa inteeda kale.
Wuxuu leeyahay hab dhaqan dimuqraadiyadeed oo ay dheehan tahay xasilooni, taasoo ay jiraan haween tiradoodu aad u sareyso, oo ku matala bulshada dalkaasi baarlamaanka.
Dadka dalkaasi waxey aad u jecel yihiin qeybaha kala duwan ee isboortiga, gaar ahaan Kubadda Koleyga iyo Lagdanka, halka dalkani lagu yaqaano dadkiisa soo dhaweynta wanaagsan iyo deeqsinimada, kooxda xulka qaranka waxaa lagu naaneysaa Libaaxyadii Teranga ama Libaaxyadii Marti Galinta.
Laakiin waxaa jira dhibaato, taasoo ah sida ay u arkaan bulshada dadka curyaanka ah.
"Waxaa jirta jaahilnimo baahsan," ayuu ku qeexay Ibrahima sharaxaaddiisa.
"Tani dadka waxey u arkaan cadaab Ilaahey, ama waxey rumeysan yihiin in sixir la xiriiro arrintan.
"Fikirkani waa kuwo si baahsan loo aaminsan yahay, waana mamnuuc in si toos ah loo falan qeeyo ama loogga dooddo.
"Waxaa dhici karta khatar iyo nafhurnimo, taasoo keeni karta in carruurta qaarkood la bartilmaameedsado.
"Dadku umma arkaan Mariemme and Ndeye sida mataano isu dhagan.
"Waxeyse u arkaan iyaga cunug labo madax leh, noloshoodana dhab ahaantii waxey ku jirtaa halis."
Xal degdeg ah
Sidaa daraadeed markan waxaa bilawday dagaalka uu Ibrahima ku difaacayo gabdhahiisa.
Dalal dhowr ah ayuu la aaday gabdhihiisa si xal loo helo
Markii uu cawday kadib, waxaa loo wareejiyey qol sugan oo ammaan ah, kaasoo kafog meelaha ay indhaha dadku qabtaan.
Halkaasi, gabdhihii way ku koreen, waxaana soo muuqdey hab dhiska jirkooda.
Labadooduba mid waliba wuxuu leeyahay maskax caafimaad qabta, wadno iyo sambabo.
Laakiin waxay isla wadaagaan hal beer, kaadiheys iyo dheef shiid.
Mid waliba wuxuu leeyahay calool, laakiin kuwani waa isku xiran yihiin, halka ay wadaagayaan labadoodu saddex kaliyood.
Waxey labadooduba leeyihiin gacan ay wadaagaan, iyadoo inta badan ay isticmaasho Ndeye, maadaama ay tahay mataanta xoogga leh.
Laakiin maadaama haatan Ibrahima uu bilaabay fahamka iyo xaaladda ku gadaaman gabdhihiisa mataanaha ah, sidaa daraadeed waxaa u caddaatey inaanu jirin qorsho lagu caawinayo iyaga.
"Ma jirin dad la xiriiraya dhakhaatiirta sida gaarka ah ugu takhasusay" ayuu yiri. "Ma jirin qof caawinaya ama dhankooda soo dhuganaya oo la safan.
"Waxey sugayaan oo kaliya inta ay ka dhimanayaan."
Sidaa daraadeed tani waa ugu danbeyn markii uu la wareegayey daadihinta maamulka gabdhihiisa.
Saddex toddobaad kadib, gabdhihii isbitaalka waa laga soo sarey iyagoo la keenay gurigoodii, halka hooyadii ay kasoo kabaneyno qaliinkii lagu sameeyey.
Ma aaney awoodin iney runta sheegaan, iyadoo labadooduba waa Ibrahima iyo xaaskiiba ay been u sheegeen dariskii iyo saaxiibadii, taasoo ah in cunugii uu wali ku jiro isbitaalka.
Laakiin markii Ibrahima uu dib ugu noqday shaqadii, la shaqeynta hey'adihii iyo ururadii abaabulka dalxiiska ee gobolka, ayuu dib u bilaabay.
"Mar waliba oo aan firaaqo helo, waxaan baarayey mataano isku dhagan," ayuu yiri.
"Caqabad baa ila soo gudboonaatay - oo ah inaanan marna ka tagin ixtiraamka aan u hayo gabdhahayga, mana rajeyneyn inaan u arko dhibaato - waxaana ku dadaalay inaan caawiyo".
Waxaa jira qof ku takhasusay barashada luqado badan, ayuu bilaabay Ibrahima inuu kaashado, bal si ay ula xiriiraan isbitaalo kala duwan mid mid, iyagoo baadi goobaya bal haddii ay macquul tahay in gabdhahan la kala sooco/la kala qeybiyo.
Marka koowaad, maadaama shaqadiisa ay la xiriirtey magaalada Brussels, wuxuu isku dayey inuu la xiriiro dalkaasi Belgium-ka, laakiin waxaa loo sheegay inaanu jirin isbitaal ka caawin kara kala qeybinta gabdhihiisa oo halkaasi ku yaalla.
Markaas markii xigay wuxuu la xiriiray Jarmalka, halkaasoo ay ku noolaayeen laba gabdhood oo walaalihiis ah, laakiin ma jirin isbitaalo ay soo mareen kiisas sidan oo kale u adag.
Wuxuu kaloo isku dayey dalalka Zimbabawe, Norway, Sweden, iyo isbitaallo ku yaalla Mareykanka, - sida Seattle oo ku yaalla Washington , Jacksonville oo ku yaalla Florida iyo Baltimore oo ku yaalla Maryland.
Dhakhaatiir joogta isbitaal ayaa ku wargaliyey Ibrahima inuu siiyo hal million oo doolar, inta aaney qaabilin gabdhaha.
Markii ugu danbeysay, wuxuu isku dayey isbitaal ku yaalla dalka Faransiiska, isagoo rajeynaya in dalkani si un u caawin doonaan, maadaama xiriir adag leeyihiin dalka Senegal.
Wuxuu u direy email ay ku jiraan baaritaanka gabadhihiisa, iyo sida xaalkoodu yahay.
Laakiin jawaab celintii lasiiyey waxey aheyd mid xun oo aad u qaab daran.
Tani wuxuu ku ogaaday inaanu isku wareejin raadinta caawimaad, gabdhahanina ay dhiman doonaan, maxaa yeelay ma jirto xal caafimaad oo loo heli karo.
"Ma qiyaasi karo sida uu maskaxdeyda u dhaawacay email-kii la iigu soo jawaabay," ayuu yiri Ibrahima.
Waxey aheyd mid xambaarsan kibir iyo isla weyni, iyagoo noola dhaqmay aniga iyo gabdhahaygaba si yasma ah oo aan ixtiraam laheyn.
"Dhakhaatiirtani ma laheyn maskax iyo caqli ay ku ogaadaan, dabadeedna ay nagula macaamilaan, maxaa yeelay xaalkayagu ayaa ahaa mid adag.
"Laakiin caqabaduhu waxbey ku baraan maskaxdana way kobciyaan, si aad u gaarto nolol wanaagsan oo qurux badan,
"Kuma qiyaasi karo tilmaan sida dhakhaatiirtani ay ii geeyeen heer hoose, iyo sida nolosheyda ay mugdi u aheyd.
"Waxey kuwani soo oodeen wadiiqo kasta oo jiri kartey oo aan rajo ka lahaa."
Wali inkastoo Ibrahima uu murugeysan yahay, wuxuuse qabaa rajo adag oo ah inuu xal heli doono.
Maalinba maalinta ka danbeysa, way koreen iyagoo xoogeysanaya, waxey bilaabeen dhoola cadeyn, kadibna way furfurmeen, indhahooda cadcad oo meelaha ku dheegagaya, faro yar yar oo wax ku qabqabsanayaan.
Baadi goobkii xalka kala goynta, ayuu Ibrahima mar kale dib u bilaabay .
Maalin maalmaha kamid ah, gabdhaha oo jira bilooyin kaliya, wuxuu daawadey video niyadiisa dib usoo celiyey - kaasoo oo ku arkey bar internet ah oo ay leeyihiin Abby iyo Brittany Hensel, kuwaasoo joogga gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka.
Kuwani waxey isugu dhagan yihiin sida gabdhaha Ibrahima, haatanna waxey ku jiraan dada labaatameeyada, iyagoo ku shaqeeya macalinnimo, sidoo kalana awoodda iney kaxeeyaan baabuur iyo ciyaarista isboortiga.
Ibrahima wuxuu u ahaa video-gan sida inuu helay wax cajiib ah - in mataanaha isku dhagan aaney kaliya la lagdami karin sidii ay u noolaan lahaayeen, balse ay sameyn karaan dadaal ay wax ugu qabsan karaan noloshooda.
Xafiiskiisa quruxda badan ee Dakar, wuxuu ku daawadey vidoe-gii afar, illaa iyo shan jeer, isagoo si qunyar ah u darsaya dhibaatooyinka heysta gabdhihiisa iyo sida loogu guuleysan karo xalkoodu.
"Haddii ay jirto wax un I dhiiri galiyey, wuxuu ahaa video-gan ku saabsan noloshada mataanaha isku dhagan ee Mareykanka ah," ayuu yiri
"Waxaan arkay sida qoysku uu go'aan koodu u adkaa, sida ay carruurtooda u difaaceen uguna dagaalameen.
"Waxaan markaas ku iri nafteyda, 'waxaan sidan oo kale u sameynayaa gabdhahayga'. Waxay sare u qaadey awoodda aan go'aan ku gaari karo.
Baaritaan kiisa dheeraadka ah ayaa keentay inuu helo isbitaal - kaasoo ah Ormond Street Hospital kaasoo ku yaalla London, kaasoo ay joogaan dhakhaatiir aqoon duruqsan u leh mataanaha isku dhagan.
Niyaddii Ibrahima way dagtay; ugu danbeyn wuxuu helay qof doonaya inuu caawiyo
Ibrahima ayaa yiri: "Ma aanan maqal waligeey, laakiin waxaan la xiriiriyey la taliye, Paolo De Coppi, waxaana u direy xogta gadhahayga.
"Wuu aqriyey, wuxuuna iigu soo jawaabay si fudud.
"Wuxuu igu yiri, 'Imow'."
Niyaddii Ibrahima way dagtay; ugu danbeyn wuxuu helay qof doonaya inuu caawiyo.
Wali, maahan mid fudud inuu safar ku tago London.
"Dhammaan lacagtii aan heystay waxaan ku qarash gareeyey dawo, baaritaan iyo talo bixinta gabdhaha," ayuu yiri isagoo sharaxaya xaaladdiisa dhaqaale.
"Waxaan ku lahaa caymis caafimaad shaqadeyda, ha yeeshee taasi maaheyn mid dabooli karta qarashka uu iga rabo isbitaalka ku yaalla London.
Si kastaba, waxaan gacanta ku heystaa balan qaad caawimaad, oo uu dhakhtar ii fidiyey, horeyna aanan u haysan.
Xaaska madaxweynaha Senegal, Marieme Faye Sall, ayaa ka maqashay warka ilmahan dhashay hey'addeeda, Servir Le Senegal.
Ibrahima ayaa sheegay: "Durbadiiba way ila soo xiriirtay, iyadoo u balan qaadey iney ka caawineyso wax walba oo uu u baahan yahay.
"Aad baan uga mahad celiyey, waxaana sameeyey inaan ugu magac daro toddobaadyo kadib gabadhayda iyada, taasoo ah Marieme.
Waxaan ka dagnay London bishii January 2017-kii, qoyska ayaa la kulmay Dr De Coppi, la taliye carruur oo dhanka qalliinka ah.
Ibrahima ayaa yiri: "Ma qiyaasi karin rajada iyo daganaanta aan ka helnay aniga iyo gabdhahayga maalintii koowaad ee uu na qaabilay dhakhtarkan.
"Marka aad joogto dalka Senegal, haddii aad ixtiraameyso qof indhahaada ayaad hoos u raaricineysaa, ama waxaad daymooneysaa meel fog ama hoos.
"Waa sidaas sida aan ula dhaqmayo, maxaa yeelay wuxuu aad ugu jajaban yahay shaqadiisa, waana midaas sida uu ugu heelan yahay caawinta gabdhaha.
"Wuxuu sare u qaadey dareen keyga. Wuxuu ii sheegay inuu ina caawinayo, anigoo isaga eegaya. Waa taas waxa aan doonayo inaan arko.
Sidaa daraadeed waxaa bilawday baaritaankii caafimaad - waxaa la isticmaalay aqoontii u danbeysay sida 3D iyo ultrasounds, bal si loo eego haddii ay macquul tahay in gabdhaha la kala sooci karo.
Laakiin markii ay hawsha baaritaanka qabteen dhakhaatiirtii, noloshii Ibrahima ayaa waxaa ku bilawday isbadal xun.
Lacagtii ay ugu deeqday marwada madaxweynaha Senegal waxey ku dhamaatay duulimaadkii iyo hoyga, taasoo ka dhigtay qoyskii guri la'aan magaalada London dhexdeeda.
Maadaama uu yahay aabo carruurtiisa aad uga walwala mas'uuliyadna uu isa saarey, Ibrahima ayaa ka tagey shaqadiisii, taasoo dhaxashiisay inuu noqodo qof aan meel wax kasoo galin.
Badqabka iyo nolol wanaagsan oo ay helaan gabdhihiisa darteed, ayuu go'aan sadey Ibrahima inuu magangalyo ka dalbado dalka Ingiriiska.
Wuxuu ogaa inaanu daryeelka caafimaad ee isbitaalada dowladda Ingiriiska aanu u ahaan doonin kuwo wanaagsan, sida kuwii gaarka loo lahaa ee lacagta badnaa ee ku yaalley dalka Senegal, taasoo khatar galin karta noloshada gabdhaha haddii uu geeyo.
Laakiin tani ma aheyn go'aan si fudud loo sameyn karo.
Laba gabdhood oo mataano ah oo isku dhegan misana hami fog leh
Dalkii hooyo ee Senegal, ilmihii yar yaraa ee Ibrahima oo uu ku dhalay guurkiisii koowaad isaga ayey ku tiirsan yihiin xaga dhaqaalaha.
Ma awoodo inuu lacag u diro, haatan marka waxey kusugan yihiin xaalad sugnaansho la'aan ah marka la eego dhanka gurigii kirada ee ay ku jireen, iyagoo ku dhaw in laga saaro.
Hooyada gabdhaha mataanaha, oo ah xaaska labaad ee Ibrahima, ayaa go'aan satey iney dib ugu noqoto Senegal, si ay u xanaaneyso ilmahan kale, iyadoo uga tagtay Ibrahima kaligii gabdhihii mataanaha.
Haatan waxey yihiin qoys ka kooban saddex qof, waxey u wareegeen guryo sida hoteeladii ah oo ay maamusho wasaaradda arrimaha gudaha Ingiriiska, oo ku yaalla xaafadda Croydon koonfurta magaalada London.
Ibrahima ayaa yiri: "Ma heysto shaqo, ma jirto xitaa lacag yar oo aniga magaca ku imaneysa, aniga iyo gabdhahayga mataanaha, iyo sidoo kale labaddii ilmood ee Senegal dhammaan waxaan nahay dad hoy la'aana.
"Inaan u wareego dalka Ingiriiska, waxey I dhaxal siisay inaan waayo dhammaan shaqadeydii, gurigeygii, nolosheydii iyo bulshadii aan lasoo koray aanna la noolaa.
"Laakiin waxaan sidaas u sameeyey niyad wanaag, taasoo ah inaan nolol siiyo gabdhahayga."
Xal baa ugu danbeyn loo helay carruurtii joogtay Senegal, laakiin wali xaaladda kuwa kusugan Ingiriiska waa sidoodii.
"Aad baan uga mahad noqay hotelka," ayuu ku micneeyey xaaladdiisa mar uu ka warbixiyey Ibrahima. "Laakiin dhanka kale wuxuu sheegay inaaney aheyn goob munaasib ku ah carruur yar yar.
Maadaama aanu cunto heysan, Ibrahima waxaa la kaar uu cunto ku qaadan karo.
Wuxuu yiri: "Inuu mooday in kaarkii la siiyey uu wax uga qaadan karo suuqyada waa weyn.
"Waan soonnaa maalintaas anigoo quud dareynaya inaan fuliyey wixii uu I farayey iimaan keyga oo ah diinta Islaamka, laakiin waxaan lugeeyey 40 daqiiqo, anigoo markii danbe tagey kaniisad ku taalla galbeedka London.
"Inta badan dadka uu ku arkey goobtii waxey ahaayeen dad aanan laheyn hoy, wuxuu xaqiiqsadey in taasi tahay xaaladda dhabta ah.
"Waxaan dareemay in nolosheyda ay hoos u dhacday oo aan liito. Sidee nolosheyda sidan ku noqotey?
"Waxaan bilaabay inaan ku hor ooyey dadka hortooda, laakiin waxaa I aragtay sooro waxeyna I geysay qol.
"Waxaan u sharaxay gabdhaha mataanaha aan heysto, iyo sababta aan halkani u joogo.
"Waxay ogeyd soorada inaan ahay Muslim, laakiin waxaan ka dalbadey iney noo duceyn karto, sidaa daraadeed waan wada fariisanay innagoo wada duceysaneyna illaa iyo 15 daqiiqo.
"Kadibna waxey boorso iiga buuxiyey wax alle iyo wixii ay heli kartay, markii aan kor u qaadey boorsadii aan dusha u saarto, waxey ii sheegtay sooradii inaan soo noqon karo mar waliba oo aan wax u baahdo.
Gugii sanadkii 2017-dii, waxaa isoo gaaray akhbaar ka timid la taliyihii qoyska.
In wadnaha Marieme uu yahay mid daciifa, sidaa darteedna lagu sameynayo qalliin.
Haddii la isku dayo in la kala qeybiyo, waxey u badan tahay iney dhimato.
Ibrahima ayaa yiri: "Markii aan ogaaday xaaladda, ma aanan dooney in ay sii socoto hawsha. Sideen wax u kala doortaa?
"Laakiin waxaan dareemayey oo aan xasuusnaa inaan waxba u qaban karin gabdhahayga.
"Ma ahan aniga. Waxa aan aan u xanaaqsanahay. Waxaan u xanaaqsanaa mustaqbalkeyga.
"La taliyihii dhanka caafimaadka ayaa Ii sheegay inuu na cawin doono oo uu sii wadi doono xanaanada gaarka ah, taasina waa waxa aan doonayey inaan maqlo. "
Waxaa kasoo wareegatay imaanshihii Ingiriiska Ibrahima sanad, bishii March 2018-kii, Ibrahima iyo labadiisa mataanood wuxuu xafiiska arrimaha gudaha Ingiriiska u wareejiyey magaalada Cardiff - dadka magan galyo doonka ah xafiisku wuxuu u wareejin karaa meel waliba oo ka mid ah Ingiriiska.
Ibrahima go'aankiisa ayaa la sugayaa
Waxaa loo oggolaadey inay sii joogaan Ingiriiska, waxay haatan si wadajir ah ugu nool yihiin guri yar oo ku yaalla dabaq dhaxdiisa, kaasoo u dhaw magaalada hoose.
Halkani, waa meesha ay ka raacaan bus-ka kuna soo noqdaan, iyagoo laga doonayo iney isku dawaan inaaney soo jiidan dareenka dadka kale oo ay u jirsadaan masaafo waxoogaa yara fog - waa xeelad la siiyey Ibrahima.
Mararka qaarkood, markii gabdhaha la arko, dad ayaa soo daba raaco jidka, iyagoo bilaaba iney u duceeyaan, waa wax uu u arko Ibrahima iney ku caawin doonto in dhibaatada ka joojin doonto.
Siyaabo kala duwan, halkani nolosha waa mid fudud oo lagu raaxeysan karo, inkastoo aan godoon galnay.
Gabdhihii yaryaraa ee mataanaha ahaa waxey bilaabeen iney hadlaan, waxey ku ciyaari karaan goobaha ilmaha lagu ciyaarisyo ee Ty Hafan.
Haatan iyagu ma awoodaan iney socdaan, laakiin taasi waa la rajeynayaa iney gaaraan.
Inta badan ilmuhu markey gaaraan labo sano, waxey jecel yihiin iney heesaan labadooduna waa sidaas, qosol iyo iney wax daawadaan.
Ha yeeshee dhakhaatiirtu waxey og yihiin, in bil waliba iyo sanad waliba oo ina dhaafa, in wadnaha Marieme uu sii daciifayo.
Waqti xaadirkan la joogo, waxey inta badan ku tiirsan tahay nolosheeda Ndeye.
Waxey haatan ka qaadata neefta wadnaha adag ee Ndeye, halka cuntaduna ay usoo marto caloosha ay wadaagaan.
Si kastaba, xaaladdani haatan waxey cadaadis ku heysaa wadnaha iyo jirka Ndeye.
Sanadkii 2018-kii, dhakhaatiirta ayaa u sheegay Ibrahima haddii Marieme ay si degdeg ah u dhimato, in fursadda lagu badbaadin karo Ndeye ay noqon doonto mid aad u yar.
Sidaasi darteed haatan go'aamada ku xeeran kiiskani waa uu is badalayaa, su'aasha la is weeydiinayana waxey aheyd; miyaa la isku dayaa kala qeybinta gabdhahan mataanaha ah si loo badbaadiyo nolosha Ndeye?
Tani, waqti xaadirkan, ma ahan wax uu ka fikiri karo Ibrahima.
Wuxuu ku qeexay in tani tahay "u ridashada gacan god mugdi ah oo aan la ogeyn waxa kasoo bixi doono", taasoo labada habka ay tahay kuwo khatar galinaya nolosha iyo jiritaanka gabdhahan.
Farxaddiisa waxey ku qotontaa hab dhaqanka cunto karin, u heesidda jaaliyadda Senegal kuwaasoo uu kula kulmay Bristol iyo hab soo noq noqoshada maalinlaha noloshiisa caadiga ah - ee xanaaneynta iyo waqti la qaadashada gabdhihiisa.
Isagoo diyaarinaya cashada, wuxuu yiri: "Dhab ahaantii, waxaan halkan ka helaa nolol wanaagsan oo daacadnimo ku dhisan, anigoon heysan shaqo iyo mushaar.
"Laakiin waxaan ku dadaalaa inaan xasuusto xiliyadii qurxoonaa ee aan soo marey, si aan u isticmaalo awoodda aan taa ka helo xiliyadan adag, si aan u noqdo qof wanaagsan.
"Waxaan doonayaa in waqtigan cakiran aan uga gudbo sharaf".
Wuxuu intaa ku darey: "Aniga lafteyda, waxaan doonayaa in qalbigeyga aan u sheego inaan wax waliba oo karaan keyga ah aan u qabtey iyaga, si aan u siiyo badqab iyo adeegga caafimaad ee ugu wanaagsan.
"Markii aan isku eego muraayadda, waxaan doonayaa inaan u muuqda qof xasilloon.
"Wixii intaa ka danbeeyo, wax aan ka qaban karo ma jirto.
"Mustaqbalku wuxuu u muuqdaa mid aan la saadaalin karin, ha yeeshee dagaalka nolosha maalinlaha ah ee gabdhahaygana iyo aniga waa mid aan dareemayo inuu yahay mid barakeysan.
"Waxaan ku bartay nololi waxa ay tahay intii aan la daalaa dhacayey nolosha gabdhaheyga.
"Gabdhahaygu waa dagaal yahanno duniduna waxey u baahan tahay iney sidaasi ogaadaan.
15 Jannaayo 2019
Geeska wiyisha oo sida dahabka loo dhoofiyo